အမှန်ကတော့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » အမှန်ကတော့…
Posted by kaungmyat88 on Apr 20, 2011 in Letter to The Editor, Myanmar Gazette | 21 comments
ကားဂိတ် ချိုကြီး ထွန်းသန့်ကျော် ဦးခင်မောင်မြင့် ဦးချိုကြီး
ကျနော်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်တွင်းမြန်မာပြည်ကို ရောက်တုန်း ငပလီကို အပန်းဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။ MG ရဲ့ ရွာသားများ (gipsy , i love this, oo , thanmyint) တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က “ကပ်ဖား (ခ) ထွန်းသန့်ကျော် (ခ) ကျော်ကျော် “ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို လည်း သံတွဲမြို့က တစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သံတွဲမြို့က ကျဉ်းပါတယ်ဆိုတာလေးကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ၀င်ရောက်ပြီးသာ comment မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ အမြဲတမ်းတော့ အင်တာနက် သတင်းတွေဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ရောက်နေခဲ့ပြီမို့ သတင်းထောက်တစ်ဦးပီပီ စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတော့တယ်။ ကဲ..ရွာသားတို့ရေ ကိုယ်သိခဲ့တာ လေးတွေ မျှဝေခံစားကြည့်ရအောင်လား။
သံတွဲမြို့ပေါ်၊ ကမ်းခြေမကျန် ကိုယ်စုံစမ်း ခဲ့တဲ့ သတင်းလေးတွေက စုံနေတာပဲဗျာ။
ကပ်ဖား(ခ) ထွန်းသန့်ကျော်(ခ)ကျော်ကျော် ဟာ အင်တာနက်မှာ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ တင်ထားခြင်းခံရကြောင်း။
ဌင်းသတင်းများ ကို ဖြန့်ဝေနေသူများက သူနဲ့ စီးပွားပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော ဒွါရာဝတီ ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ဦးချိုကြီး(ခ) ဦးဇော်သိန်း နှင့် ပန်းတိမ်လုပ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်) တို့က ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့
၁။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လွတ်လ်စွာခရီးသွားလာခွင့်ရလျှင် ထွန်းသန့်ကျော်(ကပ်ဖားဟုခေါ်ရတာလည်း အားနာတယ်) ၏ ကားဂိတ်ဖြစ်သည့် ရဲအောင်လံ EXPRESS မှာ လူများများရပြီး ကားများများထွက်ရမည်ကို မလိုကျတာပေါ့ဗျာ ။ အဲဒါကို တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သဘော နှင့် ထွန့်သန့်ကျော် နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်များကို ထိပ်တိုက် တွေ့ပေးလိုက်တဲ့ အနေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်တွင်တင် ပြီး သတင်းဖြန့်ဝေတာတဲ့ဗျာ။
(အဓိက ကတော့ စီးပွားရေးတိုက်ခိုက်မှုပေါ့ဗျာ ..လူများများရမှာဆိုးတာပေါ့ ၊ ဦးချိုကြီး အကြံအစည်ပေါ့)
၂။ ပါတီအတွင်း ပြန်လည်ရွေးချယ်သည့်အခါ ယခုကဲ့သုိ့ရေးသားခံရမယ်ဆို၇င် သူ့ကို လူကြီးများက အထင်လွဲမယ် အဲအတွက် ပါတီဝင် ဦးခင်မောင်မြင့် က လုပ်ကြံပြီးသတင်းတင်တာတဲ့ဗျာ။
၃။ ဦးချိုကြီး(ခ) ဇော်သိန်း ဆိုသူ၏ အဘိုးဖြစ်သူက မြန်မာပြည်ဖွား မဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ မှ ၀င်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာကိုလည်း ဖုံးကွယ်ချင်တယ်ဗျာ။
၄။တကယ်လို့ ဦးချိုကြီး၏ အဘ်ိုးဖြစ်သူက နိုင်ငံခြားသာ ဆိုတာ သိသွားရင် တပ်မတော်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးမှ သိသွားမယ် ။ သူ့သားနှစ်ယောက်မှာ(ငွေပေးပြီးရအောင်လိုက်ထားသော) စစ်ဗိုလ်များ ကို ထိခိုက်မှာကိုလည်း ဆိုးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ထွန်းသန့်ကျော်ကို အာရုံစိုက်အောင်လုပ်တာတဲ့ဗျာ။
၅။ဦးခင်မောင်မြင့်မှာ ယခု ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြီ့း (ယခင် ချဲ၊နှစ်လုံး ဒိုင်ကိုင်ခဲ့ခြင်း)ကို ပါတီလူကြီးများ သိမှာ စိုးတဲ့ အတွက်အာရုံပြောင်း မျှားဦးလှည့်ထားတာပေါ့ဗျာ။ (သိရင် ပါတီကနေ အထုတ်ခံရမှာကို)
၆။ မထသ ရာထူးဥက္ကဌမှာ မိမိ သဘောဖြင့် ရယူပိုင်ခွင့် မရှိဘဲ ကားပိုင်ရှင်များ၏ ထောက်ခံမှုရှိမှသာလျှင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် မထသတွင် အခြားသူများ အထင်မြင်လွဲမှားပြီး မထသ ပြိုကွဲပျက်စီးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သွေးထိုးပေးတာပေါ့ဗျာ။
၇။ ပိုပြီး မသင်္ကာစရာကိစ္စ တစ်ခုကတော့ အင်တာနက်မှာ ပါလာတဲ့ “ကပ်ဖား(ခ) ထွန်းသန့်ကျော်”၏ အကြောင်းအရာများကို မိတ္တူကူးပြီး လူများ အထင်လွဲမှာအောင် ၊အင်တာနက်မသုံးတဲ့ သူတွေအောင် သိအောင်ပေါ့ ဗျာ။ လူစည်ကားတဲ့ ဈေး၊ဆေးရုံ၊ပလီတွေများ လက်ကမ်းစာစောင်တောင်ဝေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပဲဗျာ။ ကျနော့်စုံစမ်းရသလောက်တော့ ဦးချိုကြီး နှင့် ဦးခင်မောင်မြင့် တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တွေ လိုက်ဝေကြတယ်တဲ့ဗျာ။
စသဖြင့်ပေါ့ ။ အဲ အချက်တွေ ပြောတဲ့သူတွေများတယ်ဗျာ ။ တချို့လည်း မှားပြီး “ကပ်ဖား” ကိုပဲ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေ ဖြစ်နေကျတာပေါ့ဗျာ။ ဒါလည်း ကျနော် သိသလောက် စုံစမ်းမိသလောက်ပါ။ဒီတော့ ဒီ “ကပ်ဖား” ဆိုတဲ့ အင်တာနက် သတင်းက မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံပြီး လူမှုရေး၊ စီွးားရေးအရ တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစွာ သိခဲ့ရပါပြီ။
နောက် ကျနော်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို မေးမြန်းကြည့်လိုက်သေးတယ်ဗျ ။ “ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဟာ ယခု ခရီးသွားလာရေးတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်ဗျာ။ ခရီးသွားလာခွင့်ကို ပြည်နယ်ထိတင်ရ တော့ ကြန့်ကြာမှုတွေရှိတယ်၊ အဲလို ထွန့်သန့်ကျော်(ခ)ကပ်ဖားကို အကြောင်းပြပြီး အင်တာနက်တင်တဲ့ ဦးချိုကြီး နဲ့ ဦးခင်မောင်မြင့် အပါအ၀င် အပေါင်းအပါတွေ လုပ်တာ နဲ့ပဲ ခရီးသွားလာခွင့် တွေ ခက်ခဲရတယ်။” အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ခရီး သွားလာခွင့်ကြပ်တည်းအောင် ဒုက္ခရောက်အောင် အဓိက လုပ်နေတဲ့ သူက “ကပ်ဖား(ခ) ထွန်းသန့်ကျော်” မဟုတ်ဘဲ ဒွါရာဝတီ ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ချိုကြီးနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မှ ဦးခင်မောင်မြင့် တို့သာဖြစ်ကြောင်းကို စုံစမ်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဲ ဆိုရင် အဓိက တရားခံတွေက ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ချိုကြီးနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မှ ဦးခင်မောင်မြင့် တို့ပေါ့။ တော်တော် မွေနှောက်တာပဲ။
လူတွေက တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော် ကိုယ့်ထက်သာတာကို မနာလိုကြတာ ဘယ်လိုအကျင့်တွေလည်းမသိဘူး။
အတင်းကြီးကို မကောင်းကြောင်းတွေစွတ်တင်နေတာ တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်လို့ .
ဒါကြောင့်လဲ ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပြန်မဖွဖြစ်လိုက်ဘူး.
နောက်ခါ ထပ်တင်ရင် ကြားထဲက အကုသိုလ်တွေပွါးပေးစရာမလိုတော့ဘူး
သူတစ်ပါးစီးပွါးပျက်အောင်ဆိုပြီး ဒီလို မကောက်ကျစ်သင့်ပါဘူးဗျာ
ရိုးရိုးသားသား ရှာစားတဲ့ထမင်းသာ အရသာအရှိဆုံးပါ..
ရွာသားတွေ တစ်ခုခုဆို သိတ်ဆန္ဒမစောစေချင်ဘူး ကလောင်သွားက ဓါးသွားထက် ထက်ပါတယ် ဟုတ်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ မဟုတ်ရင် ကာယကံရှင်မှာ အများကြီးနစ်နာမှုရှိပါတယ်
ပထမ ပို့စ်တုန်းက မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ထွန်းသန့်ကျော်ဆိုတဲ့လူ နစ်နာရတယ်
အခု ပို့စ် လည်း မှန်လားမှားလား မသေချာပေမဲ့ “ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ဦးချိုကြီး(ခ) ဦးဇော်သိန်း နှင့် ပန်းတိမ်လုပ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်) ” ဆိုတဲ့လူတွေ နစ်နာရပြီ
သိပ်မကြာဘူး နောက်တစ်ယောက်က ဒီလူတွေက အမှန်တွေပါ အမှားကတော့ ဘယ်သူဆိုတာ ပေါ် မပေါ်ပြောလို့မရဘူး
ခင်ဗျားနာမည်ပြောင်းပါဗျာ ခင်ဗျားဟာ ခုမှဝင်လာပီး အမြဲဝင်ဖတ်သလေးဘာလေးနဲ့
ကလိန်ခြုံ ငြမ်းစေ့ ဆင်တယ်ဆိုတာ သိသာလွန်းပါတယ်ဂျ..
ခင်ဗျားနဲ့ ဒီအမည်နဲ့ က မသင့်တော်လွန်းလို့ပါဂျ
ကျွန်တော် ၂ ချက်ဘဲပြောပါမယ် ၊
၁ အချက်က ခင်ဗျားဟာ us မှာနေပါတယ်ပြောတာ လိမ်နေတာပါဘဲ၊
၂ အချက်က ခင်ဗျားဟာ ကပ်ဖားကိုယ်တိုင်ပါဘဲ၊
ဒီတော့ဂျာ ဆင်သေကိုဆိတ်သားရေနဲ့ ဖုံးလဲအလကားပါဘဲဂျ
ဒီတော့ အပင်ပမ်း ခံမနေပါနဲ့တော့ဂျ၊
ခုတော့ သံတွဲမြို့မှာ ကပ်ဖားအကြောင်းအားလုံးပေါ်လွင်သွားပီမို့ လစ်တော့…၊
us ကိုမပြောပါနဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာလေဆ်ိပ်ကိုရော ရောက်ဖူးပါရဲ့လားဂျ..၊
ဟုတ်ပါပီနော် ကိုကောင်းမြတ် ခေါ် ကိုလူလိမ် ခေါ် ကပ်ဖား ရေ လစ်တော့..၊
ကျမမှာ နည်းနည်းကွဲလွဲနေတဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိလို့ ကောမန့် ပေးလိုက်မယ်နော် …။ စိတ်တော့ မရှိပါနဲ့ ကျမလည်း ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်း ရေးမိတာပါ … ။
1)	စာရေးသူက ဒီသတင်းကို ဘာလို့များ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှူလေ့လာ သုံးသပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကျမအတွက်တော့ ထူးဆန်းနေပါတယ်… လမ်းကြုံလို့ ငပလီသွားရင်း မေးကြည့်တယ်ထား … ဘာလို့များ ဒီအကြောင်းရာကို ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ပို့စ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ nick တွေပါ မှတ်မိနေသလဲ စဉ်းစားစရာပါ ..။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်တုန်း ငပလီကို သွားပြီး အပန်းဖြေတဲ့ ကိစ္စလို့ ရေးသားထားပေမဲ့ … အပန်းဖြေတာနဲ့ မတူပဲ တစ်ဦးတယောက်ရဲ့ စေခိုင်းချက် နဲ့ ဘဲဥ အစရှာသလို စုံစမ်းမိတာ … ကျနော်က သတင်းထောက်ပါလို့ ပလ္လင်ခံထားတဲ့ စကားနဲ့တော့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေပါတယ် … ။
2)	ပထမဆုံး ရေးတဲ့ ပို့စ်မှာ ဒီလို ဖြေရှင်းချက်ရေးပြီး နောက်တစ်ယောက် လက်ချက်ပါလို့ ပြောတဲ့အခါ ဒီပို့စ်တင်ချင်လို့ ဒီဆိုက်ကို ၀င်လိုက်တာပါဆိုတာမျိုး ပေါ်လွင်သွားပါတယ်… ။ သတင်းထောက်ဖြစ်ပါလျှက်နှင့် ယခင်ကတည်းက ပို့စ် တစ်ခုတစ်လေမျှ ဒီဆိုက်မှာ မတင်ခဲ့ပါပဲ (ပို့စ်မတင်ဖြစ်သော်လည်း ဆိုက်နှင့် မစိမ်းမှန်း nick တွေ မှတ်မိနေကတည်းက သတိထားမိသည် ) … ယခု အကြောင်းရာကို ဖြေရှင်းချင်၍သာ ၀င်ရောက်ရေးသားသည်ဟု ထပ်မံသေချာနေပါတော့တယ်… ။
3)	စာရေးသူရေးသား ချက်များမှာ အပျော်ခရီးသွားရင်း သတင်းလိုက်ရာ တိကျသော သတင်းအရင်းမြစ်များ ရရှိခဲ့သော သဘောဖြင့် ဖော်ပြထားသော်လည်း details အချက်လက်များ မပါဝင်ပေ ။ အချိတ်ဆက်မိမိ သတင်း စုံစမ်းပုံလေး ပြောပြလျှင်ဖြင့် ပိုမို ပေါ်လွင်ပါလိမ့်မယ် ။
4)	အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မိတ်ဆွေတစ်ဦး နှင့် မေးမြန်းချက်မှာ သတင်းထောက်မဟုတ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်က ဒွါရာဝတီ ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ချိုကြီးနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မှ ဦးခင်မောင်မြင့် တို့ လက်ချက်လို့ တထစ်ချ ပြောနိုင်တာ ဘယ်လို အထောက်ထား မျိုးကြောင့်လဲ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်… ။ စာရေးသူလည်း သတင်ထောက်ပီပီ ကျမမေးသလို မေးခွန်းမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကို မေးကြည့်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။ နောက်တပိုင်းကျလျှင် သိပါရစေလား ။
5)	စာရေးသူရေးတဲ့ အမှတ်စဉ် (၇)ကိုလည်း ကျမစိတ်ဝင်စားပါတယ်… သေချာလေး တင်ပြပေးပါ ။ ကျနော့်စုံစမ်းရသလောက်တော ဦးချိုကြီး နှင့် ဦးခင်မောင်မြင့် တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တွေ လိုက်ဝေကြတယ်တဲ့ဗျာ။ လို့ … ရေးထားပါတယ်နော်… အပန်းဖြေခရီးထွက်ရင်း ဘယ်လို သေချာအောင် စုံစမ်းခဲ့လည်း ပိုသိရလျှင်ဖြင့် ဖတ်ရတာ အနှစ်သာရရှိပါတယ်…
6)	ဒီအကြောင်းရာ ပို့စ်တင်တုန်းက ကော့မန့်လာပေးတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကြေကြေကွဲကွဲရေးထားတဲ့ လူတွေလည်း ပါတာ တွေ့ပါတယ်… ။ သူတုိ့တွေကရော တပါးလူရဲ့ စေခိုင်းချက်နဲ့ (ကပ်ဖား) ဇာတ်လမ်းကို အကွက်ဆင်ပြီး မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ အကြံတူ တွေ ဟုတ်မဟုတ်လည်း သိချင်ပါသေးတယ်… ။
7)	နိဂုံးချုပ်ချင်တာကတော့ ကျမ က ဘယ်ဘက်ကမှ မဟုတ်ပဲ စာဖတ်တဲ့ လူတယောက်ပါပဲ … ။ အတိုက်ခံ ရေးသားတယ်လို့လည်း မယူဆစေချင်ပါဘူး ။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ဘယ်သူပဲ ဒီကိစ္စရဲ့ တရားခံဖြစ်ဖြစ် ကျမအတွက် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ပို့စ်တင်လာတဲ့ စာလေး တစ်ခုပေါ် သိချင်စိတ်ပြင်းပျလွန်းလို့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတယ်လို့ မှတ်ယူပါ… ။ နောက်တပိုင်းကိုလည်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ .။ မ etone ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါ comment ပေးတဲ့ လူတွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ ကျနော်နားလည်ပါတယ်။ ကျနော်ဖြေရှင်းပါရစေ။
– လမ်းကြုံလို့ မေးကြည့်တာလည်းမှန်ပါတယ်။ နောက်ပြီး nick တွေ ဘာလို့မှတ်မိသလဲ ဆိုတာကတော့ Post တစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုရေးမယ်ဆိုရင် အဲ Post ကို ပြန်ကြည့်တတ်ပါတယ်။ မ etone လည်း အဲလို ပြန်ကြည့်တဲ့ အကျင့်ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲလိုပြန်ကြည့်တဲ့ အခါ copy , paste သုံးတတ်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ အဲအတွက် nick တွေက connection ရှိတဲ့ ဘယ်နေရာက မဆို ပြန်ကြည့်ရလွယ်ပါတယ်။ ဒါခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စလည်း မဟုတ်သလို၊ ကျနော် ဦးနှောက်ကောင်းနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
– နောက်တစ်ခု က ဒီ post တင်ချင်လို့ ဒီ ဆိုဒ်ကို ၀င်တာ မှန်ပါတယ်။ ကျနော့် အမြဲရေးတဲ့ blog တွေ ၊ forum တွေ ၊ site တွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ site တွေ မှာ မရေးဖြစ်ပါဘူး။ ဒီ ဆိုဒ်မှာ တင်ရတာကတော့ ဒီ လူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေ ဒီဆိုက်မှာပဲ ဖတ်မိတဲ့ အတွက် ဒီ ဆိုဒ်မှာပဲ ဖတ်နိုင်အောင် တင်ရတာပါ။ စုံစမ်းပုံကတော့ သတင်းထောက်သမား အတွက် ပြောပြဖို့ မသင့်တော်ပါ။ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်လို့ပြောပြတဲ့ လူတွေရဲ့ နာမည်တွေ ကို သတင်းထောက်တစ်ယောက်က လျှို့ဝှက် စမြဲပါ။ဒါ မှလည်း သတင်းထောက်တစ်ယောက်ပီသမှာဖြစ်သလို၊ နောက်နောင်လည်း သတင်းပေးတဲ့ သူတွေက ပေးရဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် စောင့်ထိန်းရပါတယ်။
-နောက် မ etone ပြောတဲ့ နံပါတ်(၄) အချက်ပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မိတ်ဆွေဆိုတာ။ ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူပေါ့။ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောရရင် ကျနော်ကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီလောက်ဆို ကျနော်လည်း အတိအကျရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် နော်။
– နံပါတ် (၆) အချက်ကိုတော့ ကျနော် လည်း မ etone မေးထားတာလေး သဘောကျပါတယ်။ မ etone ပြောသလိုပေါ့ ဘယ်ဘက်ကမှ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျနော့်တို့ အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေ ကြားမှာ သဘောထားကွဲလွဲနေတာလေးတွေ နှိုင်းယှဉ် ဖတ်လို့ရအောင်၊ ဝေဖန်နိုင်အောင်တင်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ အဲအတွက် ဟိုဘက်က ရေးတဲ့ သူကိုလည်း ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ ကျနော့် က အဲအတွက် ဒီ Post ကို ဒီမှာတင်တဲ့ သဘောပါ။ ကျန်တဲ့ မေးစရာရှိ သည်များကို ကျနော့် email
kaungmyat88(at)hotmail.com ကိုမေးပို့ ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အခု US ကိုပြန်ရောက်နေတဲ့ အတွက် ဒီ site ကို ၀င်ရောက်မှုနည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားရင် အားသလို ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟ ဟ..ဟုတ်မှလဲလုပ်ပါ ဖိုးတွမ်တီးရာ..မင်းနာမည် ဖိုးတွမ်တီးလို့ဘဲ ခေါ်ရအောင်ဗျာ…
US ကတောင် လာပီးသတင်းထောက်ရတယ်လို့ဗျာ…ကိုလူညာ…
ဒီဆိုဒ်ကို ဝင်ဖတ် သလိုလို အီးယောင်ဝါး လာလုပ်ရအောင် MG ကရွာသူရွာသားတွေကို အချဉ်လို့ထင်
နေရင်မှားပေမပေါ့ ..ကိုလူလိမ်..ခင်ဗျား ခုမှဒီ ဒီကို ဒီတစ်ခေါက် သာလျှင်ရောက်ဖူးတဲ့သူမှန်း အားလုံး သိကြပါတယ်ဗျ…ကိုညာစားရေ..ငါတို့သိသလောက် နင် ဟာ..ဒီ MG ကို အရင်က တစ်ခေါက်တစ်လေ လေးတောင်ရောက်ဖူးခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူးဗျာ…
ခင်ဗျားဖြီးဖြန်း လို့ရအောင်..ကလေးသူငယ် တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးဆိုတာ သိမှသပါလေစ..
စာအရေးအသား ကောင်းရုံလေးနဲ့. ခင်ဗျားလို လူလိမ် လူညာ ကိုယုံကြည်နေမယ်ထင်ထားတာက
ပီးတော့..US မှာနေပါတယ်ဆိုတဲ့စကား နောက်ထပ်မသုံးပါနဲ့တော့ဗျာ..ခင်ဗျားလိုလူလိမ်တစ်ယောက် အတွက်အရမ်းမြင့်လွန်းနေတယ်..
မရှက်ဖူးလားဗျ..ကြားရတဲ့သူတောင် နားရှက်တယ်…ခုဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက
ဒီသတင်းကိုရေးသား ကြောင်းသိတဲ့သူတွေ သိနေကြပါပြီ…
ကိုဇစ်ပို ပြောသလို..န ငယ် ရေး ချ ဝတ်စ ၂ လုံး ပေါက် ..နားတော့ဗျာ..
လစ်တော့ဗျာ..ခင်ဗျားလို လူလိမ် အတွက်..နေရာ ရှားပါတယ်ဗျာ..သနားတယ်..သိလား…
ဝေဖန်ဘို့ဥာဏ်မမှီတော့ဘူး၊ ဟိုသူပြောတော့လဲဟုတ်တုတ်တုတ်၊ ဒီလူပြောတော့လဲဟုတ်တုတ်တုတ်။
မမ etone ပြောတာလေးက အားလုံးသံသယ တွေကိုလျော့ပါးစေပါတယ်…
ခုပြောနေပါတဲ့..သတင်းထောက် မှ မီးမောင်းထိုးပေးခြင်းခံရတဲ့.. ဦးချိုကြီး နှင့် ဦးခင်မောင်မြင့် တို့အား ရင်နှီးခြင်းမရှိ ပါကြောင်းဦးစွာ တင်ပြလိုပါတယ်…
ကပ်ဖား မှ ဥပါယ်တစ်မျှင် ဖြင့် ဖြေရှင်းချက်ပေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါကြောင်း..
အင်တာနက် တင်သူမှာ သူတို့ဖြစ်ကြောင်း တိကျစွာ ပြောဆို နိုင်ခြင်းက သက်သေ အမှန်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျ..
ယ္ခုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးထိခိုက်အောင်ပြောဆိုနေပါသည့်အတွက် ၎င်း posts အား
ဖျက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည် သူကြီးခင်ဗျား…
အမြန်ဆုံး ဖျက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည် သူကြီးခင်ဗျား…
ဟုတ်ကဲ့။ ကို Gipsy ခင်ဗျ။ ကို Gipsy ရန်ကုန်မှာ နေတယ်ဆိုတာက အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။
– ယခုကဲ့ သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက်အောင် ပြောဆိုနေပါသည့် အတွက် posts အားဖျက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည် ။ ဆိုသည့် အတွက် ဒီ site ရဲ့ နံပါတ် ၁၁ စည်းကမ်းကြောင့်လားလို့ မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ (11. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်စေသော ပို့စ်၊ကော်မန့်များကို ကာယကံရှင်မှ အယ်ဒီတာထံ ကန့်ကွက်စာအီးမေးလ်ပေးပို့ပြီး ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုစေလိုသည်။) လို့ admin များ စည်းကမ်းကို ကျနော်ဖတ်ထားပါတယ်။ အကယ်လို့သာ ကို Gipsy သာ ကျနော် ရေးတဲ့ posts ထဲက တစ်စုံတစ်ဦးပါလို့ သက်သေပြနိုင်ရင် ကျနော် ရေးထားတာကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် Edit လုပ်ပေးပါမယ်။
-နောက်နည်းလမ်းတစ်မျိူးကတော့ ကို Gipsy သိမှာပါ ဟိုဘက်က thanmyint84 ရေးထားတဲ့ “အစ္စလာမ် ဘာသာ
ဝင်များအပေါ် ဒုက္ခပေးရန်နေ့စဉ် ကြံစီလျှက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်၊” ဆိုတဲ့ စာသား နောက်ဘာမှ မသိတဲ့ အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေက အလိုလိုနေရင်း ဒီစာကိုမြင်တာနဲ့ကို ကပ်ဖား ကို မုန်းတီးနေမှာ အမှန်ပါ။ တကယ်လို့ ကို gipsy က သာ ဒီ site ရဲ့ စည်းကမ်း ကိုသာ သိရင် – ဥပမာ ။ ။(6. လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။ ) ဆိုသည့် အတိုင်း ကို Gipsy ကိုယ်တိုင်က ကို အဲ posts ကို ဖြတ်ဖို့ တိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် ကိုယ်ချင်းစာစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
– ဒီ site ရဲ့ admin များ ခင်ဗျ။ ကျနော့် တို့ လူမျိူး အပေါ် နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ site စည်းကမ်းချက်များနဲ့ အညီ လုပ်ဆောင်ပေးပါလို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျနော့်တို့ လို blogger တွေ အတွက် တိကျစေလိုပါတယ်။
– နောက်တစ်ချက်ကတော့ Admin များနှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက်ပါ။ အရင် post တင်တဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ချိုကြီးနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မှ ဦးခင်မောင်မြင့် ဆိုတာပါဝင်ကြောင်း သိသာ ထင်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျား။ သူတို့ ထဲမှ တစ်ယောက်ဟာ ကျနော့် post ကို ဖြတ်ခိုင်းနေခြင်းဟာ သိသာ ထင်ရှားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကပ်ဖားအကြောင်း ရေးသောပို့စ် များထဲမှ comment ပေးသော(အချို့သော) သူတို့မှာ ကျနော့် ပို့ကို လာရောက်ဖြတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေပါကြောင်းသိသာထင်ရှားနေပါတယ်။
မှန်သလား မှားသလားပြောပါလား မုသားမသုံးနဲ့လေ။
လူသား လကမ္ဘာရောက်တာလဲ တစ်ခေါက်မကတော့ဘူး။
ဟိုအရင် ငယ်ငယ်က ကျော်ဟိန်း ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို သွားသတိရလို့ပါ။
ဟိဟိ ကိုပေါက် ကျောတာ မှန်လိုက်တာဂျ..
ဟင်း တော်ပါတော့ရှင် ရေးထားလိုက်တာများအံ့ပါ့ အရူးအမဲသားကျွေးရေးခိုင်းလိုက်သလား ငကျော်ရဲ့ ။ ခွေးဇတ်ခင်းနေပြန်ပီပေါ့ ငွေပေးလိုက် ရေးတတ် ဟောတတ်တဲ့ ကွပ်စိပ်ဆရာယောင်ယောင်တကောင် ကဘုမသိဘမသိဝင်ပြီး စကားရောဖေါရောလုပ်ပြန်ပီ။ကိုကောင်းမြတ်ရေ ရှင့်နှမတွေ မအေတွေ ပေးသာကြည့် ဗိုက်တလုံးနဲ့ မကျန်အောင်ဆေးပါထိုးပေးလိုက်။ကုလားဇတ်ပျက် ဒီလိုလူမျိုးအော် ကျောကျော် သူ ကုလားမဟုတ်မှန်းသိအောင် ကုလားအသေ မုန်းပြနေတဲ့ ကောင်။ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိတဲ့ ကိုကောင်းမြတ်ရေ အကြောင်းစုံဇတ်ကုန်သိချင်ရင် ခင်ဗျားဆွေ မျိုးတွေ သမီးသာပေးကြည်ုလိုက်တော့။ကျွန်မတော့တခါကနေနှစ်ခါအရှက်မကွဲရှင်တော့ဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တစ်ခုလောက် တောင်းဆိုပါရစေ။ ကျနော့် ပို့စ် မှာ comment ပေးတာ ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံမှု မပြုဖို့ သတိပေးပါရစေ။ မိန်းကလေးလည်း မိန်းကလေး အလျှောက်ပေါ့ဗျာ။ အေးအေးဆေးဆေးပြောသင့် ပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်..ရေးထားတာ ကောင်းပါတယ်…သတင်းလိမ်လေး တစ်ခုကလွဲလို့ပါ……
ဒီလို သတင်းအညာတစ်ပုဒ် အတွက် ခင်ဗျားရဲ့..Kaung Myat 88 နာမည်ကိုမဖျက်ပါနဲ့လားဗျာ…
ဒီလို လျှာအရိုးမရှိ ဝင်ညာခိုင်း တဲ့ ကပ်ဖား ထံက ပိုက်ပိုက် ဘယ်လောက်များရလိုက်လို့ပါသလဲ…
ဟုတ်ပါတယ်..တော်ပါတော့ဗျာ…ခု ကိစ္စက ဖုံးဖိလို့ မရတဲ့.အခြေအနေ မျိုးကို ရောက်ရှိနေလို့ပါ..
ခု ဆိုရင် မြ်ို့သူမြို့သား အားလုံးက အဲ့ဒီ ကပ်ဖားကို အရေးယူ ဆန္ဒပြ နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
ပြီးတော့.အားဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးကလဲ..ကပ်ဖားကြီး ကို ဝေါင်ဝေါင်ရွှေး..
ဝေးဝေး ရှောင် နေကြပါပြီ ခင်ဗျ….
ဒီရွာထဲ မှာ…အရမ်းနုနယ်သေးတဲ့..မန်ဘာ လေးတွေကို သာလှည့်စားလို့ ရချင်ရပါမယ်..
တဲ့…ဥပမာ.editor etone နဲ့ တခြား အကိုတွေ အမတွေ ရှိကြပါတယ်..
တဖွဲ့ထဲလုပ်ကြံသူတွေ လို့စွပ်စွဲချက်ကို ရှင်းပြပါရစေရှင့်၊
ခုဆိုရင် ကိုကောင်းမြတ်တင်တဲ့ ခုသတင်းကို ထွန်းသန့်ကျော် ကိုယ်တိုင် လိုက်လံဝေငှ နေတဲ့သတင်းပါ၊
တခုလဲပြောပြချင်ပါတယ်၊ ကပ်ဖားဟာ ကွန်ပျုတာ စာစီစာရိုက် မိတ္တူလုပ်ငန်းကိုလဲ ဟိုးအရင်ထဲကလုပ်
ခုတော့သူကိုယ်တိုင် ကူယူပီး တစ်မြို့လုံး သိအောင်ဖြေရှင်းသည့်အနေနှင့်လက်ခံနိုင်လောက်သည့်နေရာ
များသို့ ကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်လျှက်ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ ခုစွပ်စွဲခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦးသိက္ခာကျ အောင်လုပ်
ဆောင်နေသည့်အတွက် ယ္ခုသော် မြို့သူမြို့သားများမှာ တက်ခေါက်သူခေါက်၊ အံကြိတ်သူကြိတ်ဖြစ်
ကျွန်မလဲ ရွာကိုခန ပြန်နေခိုက်မို့ သတင်းအသိနောက်ကျခဲံ့ရတာဖြစ်ပါတယ်၊
ခုလိုလိုက်ပီး စေတနာ ဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးကြပါသောမိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
ကိုကောင်းမြတ်ပြောသလိုအားလုံးတစ်ဖွဲ့တည်းသာဖြစ်လိုက်ချင်ပါတော့တယ်၊ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီထက်ပို
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် မ etone မေးထားတဲ့ နံပါတ် (၆) အချက်ကို အခုဖြေပေးပါ့မယ်။ အချိန်တန်ပြီလို့လည်း ထင်လို့ပါ။ မ etone ခင်ဗျား။ မ etone မေးထားတဲ့ နံပါတ်(၆) ၊ ၊ဒီအကြောင်းရာ ပို့စ်တင်တုန်းက ကော့မန့်လာပေးတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကြေကြေကွဲကွဲရေးထားတဲ့ လူတွေလည်း ပါတာ တွေ့ပါတယ်… ။ သူတုိ့တွေကရော တပါးလူရဲ့ စေခိုင်းချက်နဲ့ (ကပ်ဖား) ဇာတ်လမ်းကို အကွက်ဆင်ပြီး မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ အကြံတူ တွေ ဟုတ်မဟုတ်လည်း သိချင်ပါသေးတယ်… ။ ဆိုတာနဲ့ အခု comment ပေးတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ မ etone မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်ထွေထွေ ထူးထူးရှင်းပြဖို့ မလိုတော့ ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စကားဟာ သူ့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ အမူအကျင့်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ တခြား comment တွေကို ဖတ်ပြီး မ etone နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မ etone ကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ မေးလို့ ။ ကျနော်တို့ blogger တွေ လိုအပ်နေတာ မ etone လို comment လေးတွေပါ။ စကားထဲက ဇာတိပြတဲ့ comment တွေ ကျနော် လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ အချို့သူတွေဟာ တစ်ဖွဲ့တည်း လုပ်ကြံသူတွေ ဆိုတာ ကို
အခြားသူတွေလည်း နားလည် သွားလိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
နောက်ကျသွားပါတယ် ၊ ပွဲကောင်းနေလိုက်ကကြတာ၊ ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးမို့လို့
ခက်လိုက်ပါဘိတော့ ဘာမှ နကန်းတစ်လုံးမှမသိဘဲ အခကြေးငွေယူပီး ယောင်ဝါးဝါး
ရှင်က စာရေးသေသပ်ပါပေတယ် ညက်ပါပေတယ် ဒါပေမဲ့ တခြား posts လေး
တွေ တင်ပေးနေမယ်ဆိုရင် အလွန်ကောင်းမှာပါ ၊
ဦးကောင်းမြတ် ရှင့်နာမည်တစ်လုံးတော့ ပျက်သွားပါပီ..၊
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မက သံတွဲမြို့သူစစ် စစ်ပါ ၊ ရှင်ဒီလောက်တောင်
ရက်စက်ရပါသလား ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဖျက်သာသနာပါဖျက်မဲ့ ကပ်ဖား
သတင်းအမှန်လေးတစ်ပုဒ် လေးဟာရှင့်ကြောင့် ဒီရွာမှာဂယက်ထခဲ့ရပါပီ၊
ဒါနဲ့မှ မရပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် ရှင်ဟာ လူလိမ် လူယုတ်မာ ကပ်ဖား ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ
ခု မန္တလေးဂေဇက်ထိအောင်တက်လာခဲ့ပီး လုပ်ကြံဖြေရှင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ရှင့်ကို ဒီတစ်
ရှင့်ကိုမရရင်ရတဲ့နည်းနဲ့လက်တုန့်ပြန်ပါတော့မယ် ၊ လူယုတ်မာရေ သတိသာထား
kaungmyat88 က ကျွန်တော်တို့ မြို့ ကို တစ်ကယ်လာရောက်လည်ပတ် ခဲ့တယ်ဆိုရင် လာရောက်စုံစမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင် သိပ်ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ တစ်ကယ်ရောက်လာတယ်ဆိုရင် ဒေသခံ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဧည့်ခံ ကြိုဆို ခဲ့ရမှာဗျာ။
ဟဲဟဲ ဒါပေမဲ့လေ အခုလို ကလိမ်စေ့ ဥာဏ်ဆင် ပြီး မဟုတ်ကို အဟုတ် မရှိကို အရှိ ရေးနေတာ မြင်ရတော့ အံသြမိပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲ့ စနစ်သစ် နည်းစနစ်တွေ ကို ကပ်ဖားကြီး က လက်ဝေခံ လိုက်ပြီထင်တယ်။
ဘာတုန်းဗျ ငါးမင်းဆွေ ရဲ့ မွေးစားသားလေး ပေလာ့ လို့ထင်မှတ်မှားရလောက်အောင် စာပေ အရေးအသားတော်ပါပေတယ်။ ကျုပ်တို့ တောသားတွေ ကတော့ အဲ့လောက်မတတ်တော့ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောတတ် ရေးတတ်တော့ ခက်တယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ စစ်အစိုးရ ခေတ်အခါတုန်းကတော့ handphone တွေ လုပ်ကိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေ တော့ ငါးမင်းဆွေ လို လူမျိုးက မက်ပြီးရေးတယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားကိုရော ဦးထွန်းသန်းကျော်က handphone တွေ အလုံး ဘယ်နှစ်ဆယ်လောက် လည်ပင်းမှာ ဆွဲပေးပြီး ရေးခိုင်းလိုက်တာတုန်းဗျ။ ကျွန်တော် သိသလောက် ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ဦးချိုကြီး(ခ) ဦးဇော်သိန်း နှင့် ပန်းတိမ်လုပ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်) ဆိုတဲ့ နှစ်ယောက်က ဦးထွန်းသန်းကျော် ရဲ့ အကြီးအကျယ်ရန်ဖက်တွေ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အကြံနဲ့ ရန်သူကိုလဲ အထိနာ ခင်ဗျားလဲ ကတ်ဖား ဘဝက လွတ် ဆိုပြီး အပြီးကြံလိုက်တာပေါ့ဗျ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်(ဟန်းဖုန်းတွေ ပေးထား အိမ်ခေါ်ပြီး နိုင်ငံခြား အရက်အကောင်းစားတွေ တိုက်ထားတော့ ကျေးဇူးရှင် ချက်ချင်းလက်ငင်း ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ) ကြီးရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ မထသ လိုင်းကားတွေ ခရီးသည်တင် express တွေ မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်များကို လုံးဝ တင်ဆောင်ခွင့်မပြုဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စားရွက်ကလေးကို မဟုတ်ကြောင်း ဦးချိုကြီးနဲ့ ဦးခင်မောင်မြင့် တို့ တွေ ရဲ့ လက်မှတ်အတုတွေ အမြန်ထိုးပြီး သက်သေခံ ပြလိုက်စမ်းပါဦးဗျ။
မထသ ဥက္ကဌ နေရာကို ဥပဒေအရ တစ်နှစ်သာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အရက်သခင် ဖုန်းသခင် ကြီးက ဘယ်နှယ့်ကြောင့် နောက်တစ်နှစ် သက်တန်းတိုးသွားတာတုန်း။ အဖွဲ့ဝင်တွေ က သိပ်ချစ်လွန်းလို့ နောက်တစ်နှစ် သက်တန်းတိုးလိုက်တယ် လို့ တော့ မပြောနဲ့ နော်။ ခင်ဗျားလိမ်တာတွေ ရွာထဲ က လူတွေ သိကုန်မှာစိုးလို့ ပါ။ ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျားလဲ သိမှာပါ။ ဥပဒေက မတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် မှ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ ကကြည့်မနေဘူးဗျ။ အဲ ပြီးတော့ ဖိနှိပ်မှု ဒါဏ်ကို မခံ နိုင်တဲ့ ဒေသခံတွေ ကလဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။
အဲဒါနဲ့ ငါးမင်းဆွေ လက်သစ်ကြီးရေ ခင်ဗျားရဲ့ သိက္ခာ တစ်ရာတွေ ကို ငွေနဲ့ လဲရဲလို့ သိပ်အံသြမိတယ်။ အခုလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ က ဘယ်သူမှန် မသိရတော့ ခင်ဗျား အပြင်မှာ အရှက်မကွဲပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လေ ခင်ဗျား ရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ကတော့ သိနေမှာပါ။